8 IziBonelelo ezinokubakho zeSoy Lecithin Powder- iSchke Chemical
8 IziBonelelo ezinokubakho zeSoy Lecithin Powder
Ukuthandwa kwesongezo se-soy lecithin kuye kwasasazeka kwihlabathi lonke njengengqithi yomlilo, akumangalisi ke ukuba intengiso ye-soy lecithin yanda. ILecithin ligama eliqhelekileyo elibhekisa kumxube wamafutha ahlukeneyo afunyanwa ngokwemvelo kwisityalo kunye nezicubu zezilwanyana. Ukongeza ekuphuculeni ukuthungwa kokutya, i-lecithin iyaziwa ngokukwazi kwayo ukwandisa ubomi beshelufu beemveliso zokutya ezinje ngeoyile yokupheka kunye nokunxiba kwesaladi.
Ekuqaleni, i-lecithin yayithathwe kwiqanda le-York, kodwa ngokuhamba kwexesha, eminye imithombo ephambili kubandakanya ikotoni, ukutya kwaselwandle, iimbotyi zesoya, iimbotyi zeztso, iimbotyi ezimnyama, ubisi, ijongilanga kunye nommbila, zichongiwe. Phakathi kwezi, iimbotyi zesoya ziphakathi kwemithombo etyebileyo ye-lecithin, kwaye oku kusizisa kwi-soc leinith.
Yintoni uSoy Lecithin?
I-Soy lecithin luhlobo lwe-lecithin ethathwe kwii-soya eluhlaza esebenzisa i-solvent yemichiza enjenge-hexane. Emva koko, ukukhutshwa kweoyile kucocwa ukukhupha i-lecithin kwamanye ama-Byproducts kwaye emva koko, ukomiswa kwe-lecithin kwenzeka. Uphakathi kwezongezo eziqhelekileyo zokutya okwangoku ezivenkileni.
I-Soy lecithin powder isetyenziswa rhoqo nakwiivenkile zokutya ezempilo njengesixhobo semveliso yokutya ukomeleza impilo yabathengi. Izongezelelo ezenziwe nge-soy lecithin powder zinikezela uluhlu olubanzi lwezibonelelo zezempilo kubandakanya ukunciphisa i-cholesterol. Kungenxa yomxholo wabo ophakamileyo we-phosphatidylcholine kunye ne-phosphatidylserine. Ezi phospholipids zimbini ziyeza ziluncedo kunyango lwe-lipid lomzimba lomntu, phakathi kweminye imisebenzi.
8 IziBonelelo ezinokubakho zeSoy Lecithin
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-soy lecithin inezibonelelo ezininzi, ezona ziphambili:
Isixa esikhulu se-cholesterol emzimbeni womntu sitsala iingozi ezininzi zempilo, esona sisona sisengozini yokuhlaselwa sisifo sentliziyo. Ngethamsanqa, abaphandi abajongana ne-soy lecithin yesondlo bafumanise ukuba i-soy lecithin powder okanye i-soy lecithin yeepilisi zinokunceda isibindi ekuveliseni inani eliphezulu le-high-density lipoprotein (HDL), ekwabizwa ngokuba yi "cholesterol" elungileyo.
Xa amanqanaba e-HDL enyuka, ama-cholesterol amabi (amanqanaba asezantsi e-lipoprotein) ayancipha. Kukho ezinye iindlela umntu anokunciphisa ngazo i-cholesterol kwinqanaba lomzimba wabo, kodwa ukuthatha ii-soy lecithin i-capsule, ubisi lwe-soy lecithin okanye ukutya okubandakanya i-soy lecithin powder lolunye unyango olusebenzayo.
Kwenziwa uphando lokuvavanya ifuthe lesondlo se-soy lecithin kubantu abanesifo se-cholesterol egazini). Abaphandi baqaphela ukuba yonke imihla i-lecithin yokuxhasa ukutya (malunga ne-17 milligrams ngemini) yabangela ukuncitshiswa kwe-cholesterol eyi-41 kwi-hypercholesterolemia emva kwenyanga.
Kwangelo xesha, inqanaba le cholesterol ye-LDL lehle nge-42% kwaye ngeepesenti ezingama-56 emva kweenyanga ezimbini. Oku kuphakamisa ukuba i-soy lecithin eyongezelelekileyo yokufunxa inokuba sisisombululo esisebenzayo se-hypercholesterolemia.
I-2.Soy lecithin kunye nokhuseleko lomhlaza webele
Ngokwe-2011 ye-Epidemiology Journal isifundo esijolise kwisosi ye-soy lecithin kunye nokuthintelwa komhlaza webele, ukusetyenziswa kwe-lecithin supplement kunokubanga umngcipheko womhlaza webele. Abaphandi baqaphele ukunciphisa imeko yomhlaza webele phakathi kwabasetyhini abasebenzisa i-soy lecithin izongezelelo ngexesha lokuvavanywa.
Kukrokreleka ukuba oku kuncitshiswa komhlaza kungenzeka ngenxa yokuba i-soy lecithin iqulethe i-phosphatidylcholine. Emva kokugaya, i-phosphatidylcholine itshintsha kwi-choline edlala indima ebalulekileyo ekunciphiseni umngcipheko womhlaza.
Nangona kunjalo, ngaphezulu kwe-soy lecithin kunye nophando lomhlaza webele kuyafuneka ukuba uqiniseke ukuba ngokwenene, i-soy lecithin inokuba lonyango olusebenzayo lwendalo lomhlaza webele.
I-3.Ulcerative colitis isiqabu
I-ulcerative colitis, isifo samathumba esichaphazelayo esibonakaliswa kukugaya ukutya okungapheliyo kwezilonda zesisu esiswini kukudumba, sibangela ukuba kube buhlungu kakhulu kumaxhoba. Ngethamsanqa, abo baye bamkela i-soy lecithin yesondlo bafumana ukukhululeka kweempawu zesifo.
Xa i-soy lecithin isongezelelo ifikelela kwikholoni, iyanyanzela, idala umqobo kwi-linings yesisu kunye nokuphucula i-mucous yayo. Isithintelo sikhusela ikholoni kusulelo lwegciwane kwaye inegalelo elingcono kwinkqubo yokugaya.
Ngcono nangoku, uphando lubonisa ukuba umxholo we-phosphatidylcholine kwi-soy lecithin powder unokunciphisa ukuvuvukala okunxulumene ne-ulcerative colitis. Oku ukongeza ekubuyiseleni umqobo we-mucus otshabalaliswa sesi sifo.
4.Ukujongana noxinzelelo lwasemzimbeni nasengqondweni
I-Soy lecithin iqulethe i-phosphatidylserine, i-phospholipid ebalulekileyo eyaziwayo ukuba nefuthe kwi-hormone yoxinzelelo. Ngokukodwa, abaphandi bacingela ukuba i-phosphatidylserine tata isebenza nge-phosphatidic acid (ekhoyo kwi-soy lecithin ngokunjalo) ukubonelela ngohlobo lokukhetha uxinzelelo lokudambisa umzimba emzimbeni womntu. Ngenxa yoko, olunye uphando lubonisa ukuba i-soy lecithin inokuba unyango lwendalo lweemeko zempilo ezinxulumene noxinzelelo.
Ukongeza, iziphumo zophando olwenziwe ngo-2011 kwaye zafakwa kwiJenali yaseMelika yoNyango lweKliniki libonisa ukuba abantu abaphakamileyo Ukutya kakhulu kwe-choline (kubandakanya abathengi be-soy lecithin abaqhelekileyo) abanamava asezantsi omzimba kunye nengqondo. Ngenxa yoko, inkumbulo engcono yokusebenza kunye nokunciphisa iimpembelelo ze-dementia.
Xa uthathwa njengokucetyiswa, i-soy lecithin yeecuba ezinokuphucula ulusu lwakho. Sisisombululo sendalo esisebenzayo se-eczema kunye ne-acne, ngenxa yesakhiwo sayo samanzi. Akumangalisi ukuba i-soy lecithin isithako esiphambili kwiimveliso ze-skincare.
Izifundo ezenziwayo kwizilwanyana ukuvavanya ifuthe le-soy lecithin ibonakalisile ukuba inokunyusa ukusebenza komzimba. Isosi yemihla ngemihla I-lecithin izongezo nceda iiseli ezimhlophe zegazi kumlo wazo wokulwa nezafozi ezisegazini.
7.Iimpawu zempawu yokuphefumla
Ngenxa yomxholo ophezulu we-choline, i-soy lecithin inegalelo kunxibelelwano olungcono phakathi kwengqondo yomntu kunye namanye amalungu omzimba. Kungenxa yokuba i-choline yearhente ephambili kunxibelelwano. Kananjalo, abantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo banokuxhamla kakhulu kwi-soy lecithin ukuba bayidibanisa kwizicwangciso zabo zokutya zemihla ngemihla.
Izifundo ezininzi zibonisa ukuba i-soy lecithin eyongezelelweyo yokutya inokunikezela ukukhululeka kweempawu zokuya esikhathini. Ngokukodwa, ifunyenwe ukuba yomeleze amandla, ukuphucula ukuqina kwe-arterial kunye nokuzisa amanqanaba oxinzelelo lwegazi kwi-standardcy phakathi kwabasetyhini abahamba nabesilisa.
Kuphononongo olwenziwe ngo-2018, abasetyhini abangama-96 abaphakathi kweminyaka engama-40 ukuya kwengama-60 basetyenziswa njengophando kwisampuli yokufumanisa ukuba ii-soy lecithin supplements zazikwazi ukuphucula iimpawu zokukhathala phakathi kwabasetyhini ababhinqileyo. Ezinye zazifakwe kulawulo lwe-soy lecithin kunye nokunye okuse-placebo.
Emva kwexesha lokulingwa, abaphandi bafumanise ukuba abasetyhini ababekwikhosi yesosi ye-soy lecithin babenekuqina okungcono kokuqina kunye noxinzelelo lwegazi lwegazi xa kuthelekiswa neqela le-placebo. Kwakhona, isibonakaliso sokudinwa kwesibonakaliso sangaphambili, kodwa oko bekungenjalo kwiqela le-placebo.
Isebenza njani lecithin?
Njengezinye iiphospholipids, lecithin iimolekyuli zinyibilika emanzini kodwa ioyile. Nangona kunjalo, ukuba amanzi adityaniswe neoyile, imolekyuli iya kunyibilika kumxube. Ngapha koko, zihlala zifumaneka kwimixube equlathe amanzi kunye neoyile, ngakumbi apho iimolekyuli zamanzi zihamba nomda weoyile. Kwiindawo ezinjalo, i-acid yazo ephelileyo inokunxibelelana neoyile kunye namaqela e-phosphate emanzini.
Ngenxa yoko, i-lecithin i-emulsify iyakwazi ukwenza izihlangu ezikhuselayo ezincinci ezijikeleze amathontsi eoyile, ngaloo ndlela ihambisa ioyile emanzini. Amaqela e-phosphate anomdla kumanzi avumela amathontsi e-oyile athi, kwimeko eqhelekileyo, angaze abekhona emanzini, ukuhlala emanzini ithuba elide. Oku kucacisa ukuba kutheni imayonesi kunye nesinxibo sesaladi singafani neoyile ezahlukeneyo kunye namanzi.
Iziphumo ze-soy lecithin kunye nemingcipheko
Ukusetyenziswa kwe-soy lecithin kunokubangela iziphumo ezibi ze-soy lecithin. Iziphumo eziqhelekileyo ze-soy lecithin zibandakanya:
Ngaba ibangela i-soy alies?
Ukuba umzimba wakho uyasebenza kakhulu kwiibhotyi zesoya, unokuhlakulela ulungelelwaniso lwesoya ekutyeni i-soy lecithin. Ke, kuyacetyiswa ukuba ubonane nomnikezeli wakho weenkonzo zempilo zoncedo xa unamava malunga nokutya okune-soybean ngaphambi kokuba uqale ukuthatha ubisi lwe-soy lecithin, ii-soy lecithin zokuxhasa nakweyiphi na enye imveliso yokutya equlathe lecithin.
Ke, i-soy allergy ikwayenye yeziphumo ze-soy lecithin. Nangona kunjalo, kwenzeka kuphela ngezihlandlo ezinqabileyo.
Ngaba kukho nayiphi na ikhonkco phakathi kwe-soy lecithin kunye nenqanaba le-estrogen emzimbeni wakho?
Kubekho ukukhathazeka malunga nolwalamano phakathi kwe-soy lecithin kunye namanqanaba e-estrogen emzimbeni womntu. Abanye abantu bathi ukusetyenziswa kwe-soy lecithin kunokuphazamisa ukuveliswa kwesiqhelo kwe-yegilo kunye neehormone ze-endocrine. Ngokucacileyo, ukuphazamiseka kungakhokelela kwiingxaki ezahlukeneyo zempilo kubandakanya imiba yokuya esikhathini.
Nangona kunjalo, imeko eyinyani kukuba abukho ubungqina besayensi obubonisa ukuba umzimba womntu unokusebenzisa "isetyhula" yesityalo njengeyaso. I-estrogen ye-Lecithin inokuchaphazela kuphela umsebenzi we-estrogenic yomntu ukuba uvela kumthombo wesilwanyana. Isifundo esenziwe nguThorne uphando siyasixhasa esi sikhundla. Iziphumo zophando zibonakalisa ukuba i-soy kunye nee-soy ze-mveliso azibangeli micimbi ye-estrogen ebantwini.
Ke ngoko, akukho ubudlelwane phakathi kwe-soy lecithin kunye nenqanaba le-estrogen emzimbeni womntu.
Ungasithatha njani isongezelelo seSoy Lecithin?
Izongezelelo zeSoy lecithin ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kubandakanya i-soy lecithin i-capsule, iipilisi ze-soy lecithin, i-soy lecithin paste, i-soy lecithin yolwelo kunye ne-soy lecithin granules.
Echanekileyo umthamo we-soy lecithin isisalamane esisuka komnye umntu siye komnye. Oku kuba kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo ezifana nemeko yezempilo ngokubanzi kunye nobudala bomthengi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba akukho bungqina bunqabileyo benzululwazi obonisa umyinge ochanekileyo we-lecithin okhuselekileyo kwimeko ethile. Nangona kunjalo, kwiimeko ezininzi, umthamo uphakathi kwe-500mg ukuya kwi-2,000 XNUMXmg, kodwa kubalulekile ukuba udibane nomboneleli wakho wezempilo ukukuqinisekisa eyona yeyona dosi ilungileyo kuwe.
Ngelixa oku akusiyo imfuneko, kuyacetyiswa ukuba uthathe izongezo ze-soy lecithin ngokutya.
I-Soy lecithin ipowder isebenzisa
I-soy lecithin powder isetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo kubandakanya:
Ukunyanzeliswa: Abavelisi bemveliso yokutya kunye neziveliso zokucoca benza i-soy lecithin ithenge ukusebenzisa i-soy lecithin powder njenge-emulsifier okanye iarhente yokuhlanganisa kwiinkqubo zabo zokwenza.
Ukulondolozwa kwezithambiso kunye nokutya: xa zidityaniswa kwiimveliso zokutya ezinje ngetshokholethi, iigravel, i-butter butter, ukutya okubhakiweyo kunye nokunxiba isaladi okanye iimveliso zezinto zokuhombisa (i-makemes, ii-shampoos, ii-conditioners zesikhumba, ukuhlamba umzimba okanye i-balms yomlomo) I-soy lecithin ipoda isebenza njengendawo yogcino ethambileyo. .
Abanye abantu benza i-soy lecithin bayithenga ukuze basebenzise i-lecithin njengento yokugcina izinto zabo ezenziwe ekhaya kunye nezokutya.
Ukuhanjiswa kweCholineAbantu abaninzi benza i-soy lecithin ithenge kuba bayazi ukuba i-soy lecithin powder ngumthombo otyebileyo we-choline. Ungatshiza enye okanye ezimbini zeetispuni zomgubo kwi-smoothie yakho, ijusi, yoghurt, iinkozo, i-oatmeal okanye okunye ukutya okanye isiselo osithandayo yonke imihla.
Esi sixhasi sikunika uluhlu lweenzuzo zezempilo. Izibonelelo zibandakanya umngcipheko wesifo somhlaza webele, ukuphuculwa kokugaya, ukungazichaphazeli, impilo engcono kwengqondo, ukukhululeka kwesifo sengqondo esixhalabisayo kunye nokuphuculwa komzimba phakathi kwabantu.
Lecithin Ukulahleka kwesisindo
I-Lecithin isebenza njengento yokutshisa amanqatha endalo kunye ne-emulsifier emzimbeni womntu. Umxholo we-choline kwi-lecithin unyibilikisa amanqatha ahlanganisiweyo emzimbeni, ukonyusa ukusebenza kwesibindi kwe-metabolism. Kananjalo, umzimba uyakwazi ukutshisa amanqanaba aphezulu ezinamafutha kunye neekhalori, kungoko ukunciphisa umzimba.
Ukongeza, uphando lubonisa ukuba abantu abathatha i-lecithin banamava angcono okusebenza ngokomzimba kunye nokunyamezela xa kuthelekiswa nabangavumiyo. Ke ngoko, ukongezwa kwe-lecithin, umntu uyakwazi ukusebenza ngamandla kwaye ixesha elide, ekhuthaza ukunciphisa umzimba.
Kuyiwaphi Thenga uSoy Lecithin
Ukucinga nge-soy lecithin oza kuyithenga kuyo? Ukuba ukhangela kwi-intanethi, uya kufumanisa ukuba mininzi imithombo onokwenza kuyo isonka se-soy lecithin xa ufuna intengiso ye-soy lecithin. Nangona kunjalo, kuya kufuneka wenze ngokukhutheleyo ukuseka ukuthembeka komthengisi wokuqinisekisa ukuba i-soy lecithin eninzi uyithengileyo iyinyani. Sukuthembe nabani na obanga ukuba une-soy lecithin yentengiso ukuba awufuni kuwa ezandleni zabanikezeli okanye abathengisi mbumbulu. Yiya kumthengisi oqinisekisiweyo kunye nelayisensi.
Ukusetyenziswa kwe-soy lecithin kuninzi kwaye izibonelelo zayo zibonisa umngcipheko onokubakho kunye neziphumo ebezinxulumene nokusetyenziswa kwe-soy lecithin. Nangona kunjalo, abasebenzisi be-soy lecithin kufuneka balandele isincomo sedosi yesongezo ukufumana okungcono kuyo. Ngaphandle koko, ngalo lonke ixesha bafuna ukwenza i-soy lecithin ithengele into yabo okanye ishishini, umntu kufuneka aqiniseke ukuba bayifumana kumthombo othembekileyo.
UChung, uC., USher, A., uRousset, uP., UDekker, i-EA, kunye neMcClements, i-DJ (2017). Ukuqulunqwa kwee-emulsions zokutya kusetyenziswa i-emulsifiers yendalo: Ukusetyenziswa kwe-quillaja saponin kunye ne-soy lecithin ukwenzela abamhlophe ikofu ebomvu. Ijenali yobunjineli bokutya, 209, 1-11.
UHirose, A., Terauchi, M., Osaka, Y., Akiyoshi, M., Kato, K., & Miyasaka, N. (2018). Iziphumo ze-soy lecithin kukukhathala kunye neempawu zokuya esikhathini kubafazi abakumgangatho ophakathi: isifundo esingalawulekiyo, esingaboni kabini, esilawulwa yi-placebo. Ijenali yesondlo, 17(1), 4.
Oke, M., Jacob, JK, & Paliyath, G. (2010). Iziphumo ze-soy lecithin ekwandiseni ijusi yeziqhamo / umgangatho wesosi. Uphando lokutya kumazwe aphesheya, 43(1), 232-240.
IYokota, D., Moraes, M., & Pinho, SCD (2012). Ukubonakaliswa kwe-lipophomeyitha ye-lyophilized eveliswe nge-soy lecithin engahlanjululwanga: isifundo sesifundo se-casein hydrolyzate microencapsulation. Ijenali yaseBrazil yoBunjineli beMichiza, 29(2), 325-335.
UZüge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, & de Paula Scheer, A. (2013). Inversion eyintlekele kunye nokuziphatha kwe-rheological kwi-soy lecithin kunye naphakathi kwee-emulsions zokutya okusekwe kwe-80. Ijenali yobunjineli bokutya, 116(1), 72-77.